Kutaura kweWorlds of DevOps, ITIL & Agile - ITS Tech School
Kutaura kweWorlds of DevOps, ITIL & Agile
DevOps, ITIL & Agile Matambudziko
Kuchinja ndicho chikumbiro chezuva racho, uye ikozvino sekare kusati kwaitika, kufamba kwebhizimisi uye zvishanduko zvitsva zvinokurumidza. Sangano nevatengi vari kutarisa kune vashandi veTI kuti vanyatsoteerera uye vataure zvimwe zvinhu zvinowanzoshandurwa nehupamhi hwepamusoro, izvo zvinounza nezvemashumiro anoratidza zvakawanda zvinokurudzira bhizinesi. ITIL ndiyo yakarongeka yenyika yose yekuendesa uye kutarisa zvitsva semushandi webhizimisi. Kudzika inzira inokurumidza kukudziridza nekugadzirisa kwekushanda (kushandisa nzira uye nzira, somuenzaniso, Scrum). DevOps inyanzvi kana nzira yekushanda iyo inogona kubvuma zvakanakisisa zvinobatsira uye kukurumidza kukurumidza kuburikidza nemaitiro akajeka akadaro.
DevOps inoshongedza chikamu chakakura chezviitiko zvehupenyu hweHIVIL. Kushanda kwekushanda (Agile) inopindirana neI IT service inotsanangura kuburikidza nekushanda kwebasa. Kushandiswa kwekushanda kunoenderera mberi kune chikamu chikuru cheupenyu hweIITIL. Apo kushanda kwebasa kunotanga pakushanda kwepachena kuburikidza nekushandurwa kwebasa kusingaperi.
DevOps "kukoshesa" kunosanganisira "nzira yekugadzirisa kukura kwekushandiswa kukurudzira:
Iyo inoramba ichishamwaridzana nekubatana kwemapoka mapoka nemapoka ekusimudzira mukati mukati rose kuburikidza nehupenyu hwekuvandudza
Kubatanidzwa kwemapoka emabasa mberi kwepurogiramu inofungidzirwa mukati mekutsanangurwa kwechiratidzo uye chirango chekugadzirirwa kwebasa
Mipiro yezvikwata zvekushanda kune zvigadzirwa zvekugadzira uye zvekushandira zvinodiwa zvebasa uye zano pamusoro pekugoneka kwerongwa urongwa hwekushandiswa
Kuvandudza sangano rekudzoka nenzira iyi kusimbisa nguva yakakosha kumusika wekutsvaga kana kuwedzerwa kushandiswa kwekushanda kwekushandurwa kunoshandiswa
Ita pasi kuodzwa mwoyo kwekutsvaga kwekutsvaga, zvakapfurikidza kugadzirisa kugadzirisa uye kukurumidza kupora nguva panguva yekuchinja kuora mwoyo
Kushandiswa kwemichina yebasa kukurumidza kuita "maitiro ekugadzira, somuenzaniso, kuchinja kwemaitiro kana kushandiswa kwemazuva ose kunorodza
Aya mazano ekubatsirana, kukwidziridzwa kwemashoko uye kushandira mabhizimusi hakusi kunze kweIITIL. Zvechokwadi, chimiro cheIITIL chinonyanya kudikanwa kwekutanga kuiswa kwehutungamiri hwekugadzirisa uye kushandiswa kwekushandisa mazano masangano anobatsira panguva dzebasa rebasa, chirongwa chebasa uye kushandiswa kwebasa. ITIL inoratidzika kuti kushanda kwebasa kukwanisa-mazano emagadzirirwo akafanirwa-anofanirwa kutanga kupa zano kurongorori neboka rekusimudzira pane kutsigirwa uye hukama hwekushanda kune mamiriro ezvinhu anorarama. Vanofanirwawo kupawo mupiro pamagadzirirwo emagetsi e "kushandiswa kwebasa," kusanganisira engineering engineering, shanduro yekushandura, kuronga kugadzira, dhizha yekugadzira, dhigiriyiti yekodhidhiki uye lera.
Simba rekuwana mauto
Vashandi vekushanda kwekushanda (kuva mutungamiri weupenyu hwose hwezvese zvinoitwa-kwete chete izvo zvakagadzirwa mumba) zvinofanira kuvharwa munguva yakarurama muhupenyu hwebasa. Chokwadi chinotaurirwa, vanofanirwa kuva ndivo vanozoshanda nebhizinesi, munhu wacho akadzingwa semukuru wehutano hwebhizimisi (BRM) uye mubatsiri webasa kuti aone, anosarudza uye anyorese "zvose zvakarongeka zvebasa" izvo zvinotarisirwa uye kuvimbisa kuti zvakabatwa mune kambani yebasa yebasa idzva kana kushandurwa kushandiswa.
Sezvinoratidzwa naI ITIL, mapoka ekugadzirisa mazano anofanira kushanda zvakasimba nehutano hunosimbisa avo vanoramba vari pakati pebasa rekushandira uye kushumira kufambira mberi nekukurumidza uye kutumira kwezvikumbiro izvo zvikamu zvehutano hwehutano huripo. Kunyange zvazvo kukurudzirwa kwakanaka kunofunga nezvekukurumidza kushandiswa kwezviito zvisinganzwisisiki pamusoro peurongwa hwebasa uye kushanda, kushandiswa kwekushanda kunobatanidza nekushandiswa kwehupenyu hwose hwehupenyu kubva pane nzira yekutarisa nekutarisa uye kutama (kushanda nekuvandudzwa) uye pakushanda uye kusina kushanduka. Iyi nzira inosimbisa kuti gadziriro yebasa (iyo ine chinyorwa) inotumira zvakanaka pamwe chete uye inoramba ichiita mukati mekushanda kwehupenyu kuronga nyaya dzebhizimisi vatengi nevatengi.
Kufanana DevOps, ITIL inonyanya kufarira nezvekushandiswa kwe "mienzaniso" uye kushandiswa kwemichina yekuita kuti kuwedzere kubereka, kukurumidza kukurumidza uye kuderedza mari. Izvo zvinonzi ITIL zvinomanikidzira, sezvo zvingangodaro, ndeyokuti ibudirire, mutengesi webasa reTI anofanira kutanga kutanga kuitika uye kushandiswa-kushandiswa kusati kwave kunzwisiswa zvakanakisisa zvakakosha zvekombiyuta. Kuchinja kwemazuva ose kana kubudiswa "kuratidza" kunofanira kutanga kuudzwa uye kuputswa, "zvipfeko" zvinofanira kubviswa, uye nzira uye interfaces dzinofanira kurongedzwa uye kugadzirwa. Pachokwadi ichocho zvinyanyiso zvakanyanyisa zvinopedzwa.
Izvo hazvina mubvunzo kuti ITIL inzvimbo yekambani inonyanya-inodzokorora kuI. Izvo zvingaita, vashandi vekutengesa vanofanira kubatsirana nekugadzirisa zviito zvakanakisisa zvekudzoka zvakare-kusanganisira Agile uye DevOps-izvo zvakaonekwa kuti zvigadzirise urongwa nebhizimisi uye mutengi, kukwidziridza hutano nekushandiswa kweT SERV services, kusimbisa kuputika kwe kuendesa, uye kuderedza huwandu hweIt cost.
Kuti urambe uchinyengera pane iyi, tarisa nzira, The Intersection of DevOps uye ITIL®.